Dhibaatada ay ku Hayaan Somaliya Dadka iyo Xildhibaanada Hawiyha Maxay tahay ?
Home Maqaallo Dhibaatada ay ku Hayaan Somaliya Dadka iyo Xildhibaanada Hawiyha Maxay tahay ?
Somaliya waxay ku dhisan tahay 4.5 oo waxaa wax lagu qeybsaday oo ah qaabka qabaliga ah ee dadku u dhasheen inuu sax yahay inuu khaldan yahay waa dood furan hasa yeeshee hadda isaga ayaa waxaa noogu dhisan nidaaamka dowladnin ee dalka a jiraa oo Ina Farmaje Madaxweyne noogu yahay. Tusaale anigu Ra’isul wasaare dalka kama noqon karo inta uu Ina Farmaje Madaxweynaha yahay. Sidaas darted xildhibaanda hada joogaa waxay ku yimaaden qaabkaas oo qabiillo ayey barlamaanka dalka ku fadhiyaan kana wakiil yihiin. Waxaa jira xildhibaano gartay inay siaas ku joogaan una shaqeeya inay ilaaliliyaan danaha dadka ay u dhasheen sida kuwa Puntland iyo Somaliland.
Haddaba waa maxay waajibaadka kowaad ee wakiillada Xildhibaanada ah? Dhulkaan aan joogno ee reer Galbeedka Xildhibaanada waa wakiillo u hadla dadka ay magacooda ku fadhiyaan barlamaanada, kuwa stateka ha noqdeen ama kuwa qaranka ha noqdeene.
Waajibadka xildhibaanada Somaliyeed ee 4.5 ku fahiyaa waa inay ilaaliyaan danaha qabillada ay magacooda ay ku fadhiyaan barlamaanka. Tusaale guri guri haddii wax daruuri ah sida daawo daacuun socdaa looga hortagayo loo qeybsado laakiin aadan gurigaaga u doodin oo wixii yaallay ay kala qaateen dadkii guryahooda u dooday adiga maxaa macnahaagu yahay?
Dalka oo dhan waxaa ugu liita labada gobol ee ay xildhibannada iyo Siyaasiyiinta Hawiyaha ay ka soo jeedaan , waxaaney labada gobolka ku dhow yihiin inay mar kale kala tagaan hogaan xumo iyo hunguri dartiis. Waayo mas’uuliyiintooda wax dan ah kama laha oo nnkii ay hadda NN la hadashaa wuxuu ku yiraahdaa maxaa la isiinayaa aniga soo kala tuuraya kuwa halkaas ku shirsan oo reerkayga ah.
Shalay oo u dambeyay xildhibaanada direed waxay qabteen shir saxaafadeed ay ugu doodayeen dhibaatada ay reerahooda -Somaliland ama dirta waqooyi ay u geysatay dawladda ina Farmaaje iyo Qayre u geysatay ee ah cunaqabteynta dhaqaale.
Haddaba maxaa loo waayey xildhibaanada Hawiye oo u doodaya dhibaatada lagu hayo dadkooda.
Hawiyaha maamuladooda sida Galmudug iyo Hirshabelle oo aan wali ku haysanno inuu Xasan sheekh u dambaabay, oo uu si Khasab ah ku sameeyey waxay ku dhamaadeen inay facooda Puntland iyo Jubaland ka haraan. Sida muuqatana Hawiyaha waa sida Tukaha oo nasiib uu caano ku helaa waa leeyahay laakiin nasiib uu ku calfado ma leh.
Caasimaddii dalka iyagaa gacanta ku haya, dhaqaalihii dalka iyagaa gacanta ku haya, tiradii dalka iyagaa u badan haddana iyagaa u liita dhinac kasta. Banaadir oo ay si kasta gacanta ugu hayaan waa u sameyn la’a yihiin maamul maamul goboleed oo ina Farmaje iyo Qayre oo sideegiis ayaa iska biisha kuna dila markey doonaan hawiyaha laftooda oo isu adeegsada.
Hawiyaha waxaa laga soo xeray albaab kasta xildhibaanoodana ma laha garasho calooshooda dhaafsiisaan oo xataa ay ugu dhiidhiyaan dhibaatada waayeelkooda, caruurtooda, Bajaajleydooda, ganacsigooda iyo umulahooda lagu hayo oo ku eg dhowr maalmood oo ay Xamar ku bannaan baxaan iskana celiyaan dowladdaan oo u cadeysay si kasta inaysan wax dan ah ka lahayn.
Dowladda Ina Farmaje dhibka ugu badan waxay ku haysaa hawiyaha oo haddii maanta doorkooda beeleed iyo kooda qarameed ay qaataan dalka oo dhan ayaa hagaagi lahaa oo dadka kale waa ku dayan lahaayeen, laakiin iyaga waxna kuma daydaan wax looga dayna lama yimaadaan xildhibaanadoodana ma hayaan wax daciifnimo iyo dhuuni raacnimo ahayn.
Colaad gaar ah uma qabo Hawiyaha laakiin waxaa I dhibaya sida dalka ay lugta u jiidayaan waayo shacbiga kale iyaga ayaa hor jooga oo lugaha haya inay dowladdan xun iska tuuraan. Tusaale Jubaland waxaa hadda loo adeegsanayaa lacagtii canshuurta laga qaaday Hawiyaha oo ah qabiilka kaliya ee 4.5 ka mid ah ee cabnshuur laga qaado, loona diido inay shaqeystaan. Haddii maanta Galmudug iyo Hirshabeele iyo Bannaadir ay ahaan lahaayeen sida Puntland, Jubaland ama Somaliland oo dadku ay noloshooda u shaqeysan kari lahaayeen suuqa Bakaaraha ayaa gobolka Geeska Afrika u ahaan lahaa Meesha ascaarta iyo dhoolarka lagu jaangooyo. Jaamacadaha iyo Cisbitaallada Muqdisho ayaa Afrikada Bari looga soo safri lahaa, lakiin waxaa waxaas oo dhan waxaa hortaagan waa dadka Hawiyaha ah oo aan masuuliyadooda qaadaneyn. Mana dhacdeen in maanta waxaan oo dhibaato ah ina Farmaaje iyo Qeyre ku sameeyaan dalka oo dhan .
Haddaba xildhibaanada iyo syisiyiinta Hawiye ha joojiyaan dalka dhibaatada dayacadda ah ee ay ku hayaan ee inta tashadaan intaysan dadkooda ka furan oo aysan xabadda ma ciin baidin ha badalaan habdhaqankooda oo dadkooda ha u turaan. Waa ceeb odayaal da’a ah oo laaluush daba orda sida Xaaf iyo Waare iyo siyaasiyiinta labada Maamul oo siayaasadda ay ga qiimo badan tahay inay laaluush qaataan.
Docda kale Inaa Farmaaje waxaa uu beesha caalamka iyo madaxda uu la kulmo wuxuu u sheegaa Hawiye ayaan ka wadi la’adahay dalka oo halkaas waxaa isugu darsan Cee boo ah inaysan tashan Karin, xaalufin dhaqaale oo canshuurtooda ayaa guryo looga kala gatay Nayrobi iyo Haargeysa.
Laga yaabe inay dad badani ii arkaan inaan ahay qof uu qabiil wado hasa yeshee haddii qabiilka Hawiayaha ah aan ka maarmo waxba kama sheegeen, waxna uma sheegeen laakiin dalkii ayaa igala dhaxeeya oo haddii ay maanta hagaagaan Ina Farmaaje sidaan dalka uma burburin kareen.
Dalkaan ina Farmaaje waxaa u dib u celiyey muddo 10 sano ka badan, waxaana uu galay dhibaatooyin iyo heshiisyo uusan 100 sano ka soo kaban doonin. Kuwaas oo ay saxeexeen dad aan siyaasadda dunida waxba ka aqoon iyo kuwa dhaafsiistay dhaqaale yar oo berriba ay ka dhimanayaan. Marka Hawiyaha ayaa dalkaan dhibaato ku ah oo gabay kaalintoodii Somalinimo iyo doorkoodii 4.5, waxayna ku haboon yihiin in wax lagu siiyo .5 iyaga waayo tiradooda badan tayo malaha.
Previous articleMW Saciid Deni oo eedeyn culus dusha ka saaray DF iyo MW Farmaajo (Akhriso)
Next articleWar Saxaafadeed ay soo saareen golaha dhaqanka beesha Saleebaan (Akhriso)